Katalogi: Holtop Rooftop-ka Hawo qaboojiyaha la baakadeeyay
Holtop dusha sare ee baakadaha qaboojiyaha ah waa qalabka dhexdhexaadka ah ee AC kaas oo isku daraya shaqooyinka HVAC (qaboojinta, kuleylka iyo hawo qaadashada iwm.) Waxayna ka koobantahay dhamaan qaybaha kombaresarada, uumiyaha, iskuxiraha iyo fureyaasha iwm. Holtop dusha sare ee qaboojiyaha qaboojiyaha lagu rakibay ayaa badanaa lagu dhejiyaa sagxadda saqafka ee codsiyada ganacsiga.
Eco-friendly: Nooca bey'ada u fiican-R410A qaboojiyaha, mugga cirbad qaboojiyaha oo ka yar.
Deggan oo lagu kalsoonaan karo: Kombaresarada waxaa sameeya walxaha kuleylka iska caabinta, qeybaha dayactirka ee laga keeno noocyada adduunka, qaab dhismeed adag iyo waxqabad la isku halleyn karo.
Naqshadeynta iyo Naqshadeynta Naqshadeynta: Isku dhafan cutubka gudaha iyo qaybta bannaanka si loo yareeyo maalgashiga mashruuca, loo gaabiyo muddada rakibaadda, keydinta booska rakibidda iyo dayactirka fudud ee hawl maalmeedka.
1. Fududee Nidaamka, Maalgashiga Hoose:
Holtop dusha sare ee qaboojiyaha baakadeysan ayaa weydiisanaya nidaam biyo qabow ama qaboojin ah, taas oo badbaadin karta qiimaha bamka wareegga, munaaradda qaboojinta, iyo qalabka kale ee ku habboon nidaamkan, sidaas awgeedna hoos u dhigaya wadarta maalgashiga iyo dayactirka nidaamka HVAC ilaa xad aad u weyn .
2. Naqshad qaabeysan, Rakibaadin Fudud oo Is-bedbeddela, Raad-yar
Shuruudaha isticmaalaha ee rakibidda ayaa si buuxda loo tixgeliyaa. Qaybta waxaa la qaatay fikrad naqshadaysan oo iswaafajinaysa unugga gudaha iyo unugyada hawo-mareenka bannaanka si aysan ugu jirin xiriir tubbo qaboojiye dheeri ah iyo shaqooyinka alxanka goobta, Waana ammaan iyo fudeyd keenista iyo rakibidda
Holtop dusha sare leh oo qaboojiye qaboojiye leh ayaa lagu dhejin karaa banaanka dhulka ama saqafka saqafka, ma lahan qol mashiin looga baahan yahay ama meel gudaha ah oo loogu talagalay in lagu xareeyo qaybta xirmada
Kaliya shaqooyin kooban oo loogu talagalay fiilooyinka korantada, fiilooyinka xakamaynta, ducting ayaa loo baahan yahay kahor nidaamka hawlgalka
3. U adkaysiga daxalka, Cimilada Xaaladaha Cimilada oo Wanaagsan
Qaybaha qaabdhismeedka unuggu waa budo loo dahaadhay ka-hortagga daxalka. Qaab-dhismeedka kuleylka-kuleylka kuleylka ah, guddiga PU sandwich-ka maqaarka ah, iyo qaabeynta qaab-dhismeedka cimilada-caddaynta gaar ahaan loogu talagalay rakibidda dibadda, dhammaantood waxay hubinayaan inay si fiican ula qabsato xaaladaha kala duwan ee cimilada ee aagagga kala duwan.
4. Hawlgallada Heerkulka Baaxadda Leh
Habka qaboojintu wuxuu awood u leeyahay inuu la shaqeeyo heerkulka bey'adda oo kor u kacda illaa 43 ° C, sidoo kale waa la heli karaa markay keliya tahay 15 ° C, si loogu qanco baahida qaboojinta gaarka ah ee qaar ka mid ah codsiyada qaarkood. Kuleylka waa la heli karaa xitaa heerkulka banaanka ayaa u hooseeya -10 ° C.
5. Dayactirka Mashruuca
Holtop dusha sare ee xirmooyinka hawo qaboojiyaha iyo qaybaha waxqabadka ayaa loo qaabeyn karaa loona soo saari karaa iyadoo loo eegayo mashruuc gaar ah. Tusaale ahaan, cadaadis sare oo banaanka ah ayaa loo heli karaa hawo qaadista masaafada fog si loo damaanad qaado hawo ku filan qol kasta oo gees ah; qaybaha ikhtiyaariga ah ayaa loo qalabeyn karaa si loo qanciyo shuruudaha macmiilka loona abuuro xaalad cimilo gudaha ah oo habboon.
Hore: Qolka Keliya ee Darbiga Fiilooday Soosaaraha Tamarta Dhuxul La'aanta
Xiga: Holtop Qaybsan Hawo qaboojiye Chiller Oo leh saar Heat
Qaybiyaha Qaybta Hawada
Saamile Saqafka Hawada ee Ganacsiga
In-Rack qiray qaboojiyaha (Link-Cloud S ...
In-Row qiray qaboojiyaha (Link-Onkod ...
Qolka-Qeexida Hawada Qaboojiyaha (Link-Wind Se ...